qalabka macruufka ah waxaa lagu yaqaan ay style iyo fasalka. Maxaad sameyneysaa haddii aad ka fekereyso inaad ugu bedesho qalab macruufka ah ka phone HTC, laakiin ma garanayaan sidii ay u gudbiyaan xogta? Xogta beddelashada ka mid phone in kale waa mid waqtiga cunaysa. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, ayaa waxaa jira siyaabo qaar ka mid fudud ka soo baxay.
Arrimaha ku saabsan wareejinta xogta ka HTC in macruufka Devices
Haddii aad la isticmaalayo telefoon oo kale HTC, waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in ay u baddashaan macruufka sida kala iibsiga xogta ma fududa. Telefoonada HTC la Android OS iyo xogta oo dhan waa kaliya la jaanqaadaya si Android. In kastoo ay jiraan habab si ay u gudbiyaan laakiin idinku waxaad ka sameyn doonaa talaabooyinka kala duwan si ay u gudbiyaan xogta kala duwan. Haddii aad wareejinta xogta ka HTC in qalab macruufka ah, halkan ku sugan yihiin arrimaha aad la kulmi kartid:
1. Xiriirada aan la keeno karo si iPhone ka aalad Android sida ay synced in Google Account. The qalabka macruufka u hagaagsan in account Lugood.
2. xogta App uma wareegi karo sida Android iyo macruufka waa laba qalab ahaanba ka duwan tahay. Waxaad heli doontaa si loo soo dajiyo version macruufka ah ee Chine kuwaas.
3. taariikheed, fariimaha, hawsha aan la synced karaa sida barnaamijyadooda kala duwan maamuli noocyada macluumaadka.
4. Waxaad heli doontaa si ay u gudbiyaan xogta si aad u pc iyo kala iibsiga inay qalab macruufka ah. Xitaa habkan, weli u hagaagsan xog dhamaystiran oo aan la hubiyaa.
Si ay u gudbiyaan xogta, waxaad had iyo jeer u baahan doontaa software xisbiga saddexaad oo noqon kara intermediator u dhexeeya labada qalabka kala duwan. Best software in in uu yahay Wondershare MobileTrans.
Waa sahlan tahay si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya labada qalabka haddii aad leedahay software sida Wondershare MobileTrans. MobileTrans Waa software weyn oo kaa caawin kara inaad si ay u gudbiyaan xogta hal click gudahood!
MobileTrans Waa software wareejinta xogta ee ay Wondershare, kuwaas oo loo yaqaan for software utility mobile. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xog ka HTC wareejiyo qalab macruufka ah ee hal click. Software ayaa si fudud u wareejin karaan noocyada macluumaadka sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, audio, video, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, sawiro iyo Guda yeedha. Waa dhamaystiran oo khatar la'aan iyo qaadataa daryeelka gaarka ah. Waxa ay taageertaa nidaamyada hawlgalka kala duwan. Halkan waxa ku jira qaababka ugu muhiimsan ee MobileTrans:
1. Software wuxuu taageeraa Android, Windows, macruufka, iyo Nokia Symbian. Waxaa la og yahay in ay ka shaqeeyaan in ka badan 3000 casriga ah ka badan shabakadaha kala duwan.
2. Isticmaalka software waxa aad dib kartaa ilaa aad content iyo soo celin tayada asalka.
3. Haddii aad rabto in aad masixi xogta phone-qabadka ama iibin sababaha, isticmaal uun software iyo telefoonka lagu ahaaneysa in goobaha warshad.
4. Isticmaalka software ah waa wax fudud oo qaadataa ilbiriqsi yar ay sabab u tahay interface dareen leh.
Hagaha ku saabsan sida loo xogta ka HTC wareejiyo macruufka isticmaalaya MobileTrans
MobileTrans Waxay leedahay nidaam aad u fudud oo ah wareejinta ah oo xog adag. Just download software ka site Wondershare ah. Waxaa jira version raad iyo version gadashada leh buuxa ah. Software waxaa laga heli karaa labada Windows iyo OS Mac, si download software ka socon kara si aad u PC. Sida aad la wareejinta doonaa Xogta xasaasiga ah, hubi inaad akhriso buuga wixii macluumaad ah. Halkan waxa ku jira shuruudaha aasaasiga ah ee habkan:
3. Cable USB labada telefoonada.
Bilow software on your computer. Haddaba tag, si ay midab buluug iyo guji ku yaal. Waa taleefanka si ikhtiyaar kala iibsiga telefoonka.
Hadda xiriiriyaan labada telefoonada isticmaalaya USB. Xusuusnow, isticmaal oo keliya ee soo saaraha ay bixiyaan fiilooyinka USB ah ee isku xirnaanta ugu fiican. Sug software ah in la ogaado telefoonada aad.
Waxaad ka arki kartaa daydo kala marka software iyaga ogaadaa. Si kastaba ha ahaatee, hubi in Source waa telefoonka HTC iyo meel loo ahaadana iyadaa waa qalab macruufka ah. Haddaba tag guddi dhexe oo dooro nooca xogta aad rabto in lagu wareejiyo ah. Waxaad ka arki kartaa fursadaha sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, jadwalka, abuse wac, barnaamijyadooda, photos, music, iyo videos.
Hadda riix Start Copy ah, nooca xogta in aad saxday lagu wareejin doonaa. Waxaad ka arki kartaa xaaladda kala iibsiga xogta ku saabsan suuqa kala horumarka ah. Waqtiga ay qaadato in sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa. Size of xogta go'aamin doona wakhtiga la qiyaasay.
Marka iibsiga dhamaato, ka saar xarkaha USB iyo aad u hubiso qalab macruufka ah. Xogtaada HTC in hadda la synced doonaa in qalabka macruufka. Isticmaal barnaamijyadooda kala si ay u helaan xogta. Waxaad heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan software goobta rasmiga ah.
Waa kuwee macruufka qalab aad u isticmaali Maraykanka ee?
The qalabka macruufka aad ayaa loo jecel Mareykanka ee. Apple ayaa abuuray taageerayaasha weyn US in alaabooyinka ay heer sare ah. Waxyaabaha waxaa loo arkaa in ay gobolka ka mid ah qalabka farshaxanka. Had iyo goor way leeyihiin aaladaha cusub oo cusub si ay u siiyaan la sii daayo kasta oo cusub. Sidaas oo macruufka qalabka sameeyo aad hadda isticmaasho?
Ma leedahay 6S iPhone weli? Just soo qaado qalab kasta oo macruufka, oo aad hubto in la jiitay waxaa by. Mase laga macruufka u badan tahay in uu noqon doono tallaabo ugu fiican ee aad qaadan kartaa baahida Kombuyuutarada mobile aad. Poll ee macruufka qalabka ugu fiican ee aad u isticmaali.
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in macruufka Devices